ဟာသများ ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
9:35:00 pm ဟာသများ No comments
ရဲစတိုင်း ၏ ဟာသများ
*** မျက်စိစမ်းသပ်ခန်းမှ ဖြစ်ရပ်…
…လူတစ်ယောက်သည် မျက်စိ အထူးကုဆေးခန်းသို့ သွားကာ
…ထောင်မှူးသည် အကျဉ်းသားကို တောင်းပန်နေ၏။
…ဟောလိဝုဒ် ဇာတ်ရံနှစ်ယောက်သည် ဘားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး
“ငါပြန်မှ ဖြစ်မယ်ကွာ၊ ငါ့သွားတွေ အရမ်းကိုက်နေတယ်၊ သွား ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး…
ဆေးထည့်ခိုင်းမယ်၊ နုတ်သင့်လည်း နုတ်ခိုင်းရတော့မှာပဲ”
“အဓိပ္ပါယ်မရှိတာကွာ၊ မနေ့ကဆို…ငါလည်း သွားကိုက်တာပဲ၊ ဒါနဲ့
ငါအိမ်ပြန်ပြေးပြီး ငါ့မိန်းမကို မွှေးမွှေးပေးပစ်လိုက်တာ… တစ်ခါထဲ
သွားကိုက်တာပါ ပျောက်သွားရော၊ မင်းလည်း ငါ့လို လုပ်ကြည့်ပေါ့”
“မင်းအကြံ ကောင်းတယ်ကွာ၊ မင်းမိန်းမဆီ ဖုန်းဆက်ထားပေးကွာ…
ငါ အခုချက်ချင်း လာခဲ့မယ်လို့ ပြောလိုက်”.
“ခင်ဗျားယောကျာ်းရဲ့ အသက်အာမခံငွေကို ထုတ်ယူလို့မရပါဘူးဗျား။ သူဟာ အခုထက်ထိ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေပါသေးတယ်”
“ကျွန်မ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဘ၀ သေနေပြီရှင်”
“မင်းမှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ဘာတွေရှိလဲ”
“ခင်ဗျားရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ လူပျိုတွေ မခန့်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေကို ခန့်ရတာလဲ”
“သူတို့က ငါဘယ်လောက်ဆူဆူ မဖြုံတော့ဘူး။ ကျင့်သားရပြီးလို့လေ”
“ဒီတစ်သက် ကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်နဲ့ သင့်တော် သူလို့ မင်းကိုယ်မင်း ထင်တယ်ပေ့ါလေ”
“ဟုတ်ကဲ့၊ မြို့နယ်တရားရုံးကတော့ အဲ့သလို ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်”
“ရော့..ဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ဆိုင်က ငှားသွားတဲ့စာအုပ်၊ တော်တော်ညံ့ပ့ါဗျား။ ဇာတ်ကောင်တွေ အများကြီး ပါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလုံးဝမရှိဘူး”
“သြော်.. ကျွန်မတို့ဆိုင်က တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပျောက်လို့ ရှာနေတာ လက်စသတ်တော့ ရှင်ယူသွားတာကိုး”
ယောကျာ်းနှင့်မိန်းမတို့ အိမ်ထောင်ပြုကြသောအခါ ပထမနှစ်တွင် ခင်ပွန်းပြောသမျှကို ဇနီးက နားထောင်ရသည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် ဇနီးပြောသမျှကို ခင်ပွန်းက နားထောင်ရသည်။ တတိယနှစ်တွင် ဇနီးမောင်နှံပြောသမျှကို ရပ်ကွက်လူကြီးမှ နားထောင်ပေးရလေသည်။
နီဂရိုစစ်သားတစ်ဦးသည် ပစ်မှတ်ကို တစ်ချက်မှ မထိသဖြင့် တပ်စုမှူးမှ ဒေါသထွက်လာပြီး ခြုံကွယ်ထဲဝင်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပစ်သတ်သေရန် အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
ခြုံပုတ်ထဲမှာ သေနတ်သံတစ်ချက် ထွက်လာပြီး မကြာမီ တပ်စုမှူးက ခြုံပုတ်ကို သွားကြည့်ရာ နီဂရိုးစစ်သားကို စပ်ဖြဲဖြဲတွေ့လိုက်ရလေ၏။
“အဟီး - ဒီတချက်လည်း လွဲသွားပြန်ပြီ ဗိုလ်ကြီးရေ”
ဘိုနူးသည် ညအိပ်ရာဝင်နီး တတွတ်တွတ် ဆုတောင်းနေသည်။
“နေပယ်မြို့ဟာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပါစေ။ နေပယ်မြို့ဟာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပါစေ။”
“ဘာဖြစ်လို့ နေပယ်မြို့ကို အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ဖြစ်စေချင်တာလဲ ဘိုနူး”
“ဒီလိုပါ မေမေ၊ စာမေးပွဲအဖြေလွှာထဲ အဲ့ဒီလို ဖြေခဲမိလို့ပါ”
“မင်းဝယ်ဖတ်တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နည်းစာအုပ် ငါ့ကို ခဏငှားဖတ်ကွာ”
“ဟင် မင်းစာအုပ်က စာမျက်နှာတစ်ဝက်ပဲ ရှိတော့ပါလားကွ”
“အေးလေ ဘာဖြစ်လို့လဲ သန်းတစ်ဝက်လောက်ပဲ ချမ်းသာရင် မင်း မကျေနပ်နိုင်ဘူးလား”
“အမေက ရှင့်ကို အတော်စိတ်ဆိုးနေတယ်။ သူနေမကောင်းတာကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြပေးလို့တဲ့”
“ဟင် မင်းပြောတော့ မင်းအမေနာမည်က ခွေးမဆိုကွ”
“အဲ့ဒါ အမေ့ရဲ့ ငယ်နာမည်ရှင့်”
“ကျွန်တော်ဟာ အနာဂတ်ကို တွေ့နေရသလို ခံစားရတယ် ဒေါက်တာ”
“နောက်လာမယ့် အပတ်ကျမှ ဖြစ်မှာပါ”
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ ဆုတောင်းပြည့်ရေတွင်းကြီးသို့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် စုံတွဲနှင့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။
ခင်ပွန်းသည်က အကြွေတစ်စေ့ကို တွင်းထဲပစ်ချပြီး ငြိမ်သက်စွာအာရုံပြုဆုတောင်းနေသည်။ ဇနီးသည်ကလည်း သူ့ခင်ပွန်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်လိုက်သည်။ သို့သော် အကြွေစေ့ပစ်ချစဉ် အရှိန်လွန် ခြေချော်ကာ တွင်းထဲလိမ့်ကျသွားသည်။
လောလောလတ်လတ် မုဆိုးဖိုဖြစ်သွားသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့မိတ်ဆွေကို လှည့်ပြောလိုက်သည်။
ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူက ဆင်ဆာဘုတ် အဖွဲ့ကို အသနားခံလိုက်သည်။
“ဆရာသမားတို့ရယ်၊ ဒီဇာတ်ကားက စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ရုံပဲ ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေအတွက် အ၀တ်အစားဖိုးတောင် အကုန်အကျ မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး”
မစ္စတာတီသည် သူ့ခေတ်သူ့အခါက အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။ တစ်ခါက မီးလောင်နေသော အဆောက်အဦးထဲဝင်ရောက်၍ လူလေးဦးကို ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော် ကံအကြောင်းမလှစွာဖြင့် ထိုသူလေးယောက်စလုံးမှာ မီးသတ်သမားများချည်း ဖြစ်နေကြလေသည်။
မနက်ခင်းတစ်ခု၌ အသက်ကြီးကြီး အဒေါ်တစ်ယောက် အထုပ်ငယ်တစ်ခုကို ကိုင်၍ လိုက်ပါလာသည်။
ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုတွင် ထိုမိန်းမကြီး ဆင်းမည်ပြုသောအခါ အထုပ်ငယ်ကျန်ရစ်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်က သတိပေးလိုက်သည်။
“အဒေါ်ကြီး ဒီမှာ အထုပ်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်”
“ထားလိုက်ပါ ငါ့တူရယ်၊ ဒီအထုပ်က အဒေါ့် ယောကျာ်းရဲ့ ထမင်းထုပ်ပါ။ သူက မေ့ကျန်ပစ္စည်း လက်ခံတဲ့ဌာနမှာ လုပ်တယ်ကွဲ့”
“ဟေ့ဝိတ်တာ၊ ငါ့လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲမှာ ယင်ကောင်ကြီးနဲ့”
“ဘာမှမပူနဲ့၊ လူကြီးမင်းရဲ့ ပေါင်မုန့်ယိုသုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ပင့်ကူက ကြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်”
ယောက္ခမကြီးက နပန်းသတ်ပုတ်နည်းစာအုပ်နှင့် ဒဏ်ကြေဆေး သုံးပုလင်းအားလက်ဖွဲ့ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အဖေကတော့ မေတ္တာသုတ်စာအုပ်နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲနည်း၊ ဥပဒေကျမ်းတစ်
စောင်လက်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ အမေကတော့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းပေါင်းတစ်ထောင်နှင့်” နင်လားဟဲ့လောကဓံ”
ဘုန်းကြီး- ရေအကျိုးဆယ်ပါး မတောင်းပဲပြည့်တယ်တဲ့။
ဖိုးထောင်- အကြွင်းမဲ့ ပြောဆိုတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဖိုးထောင်- ဒီခေတ်မှာ နွားနို့ကုလား၊ ကြက်သားသည် နဲ့အရက်ရောင်းတဲ့သူတွေကို ချန်ပြီးပြောတာနေ
ကျပ်သိပ်ရသည့်အထဲ၊ စပါယ်ရာက အထဲသို့ အတင်းတိုးခိုင်းနေသည်။
”အထဲမှာ ၀ါသနာပါရင် နှစ်ပါးသွား ဖင်ထောင်ကလို့ ရတယ်ဗျာ တိုးကြစမ်းပါ၊ အချောင်ကြီးပဲ”။ လူကြီးတစ်ယောက်က မခံချင်ဖြစ်လာကာ
”အဲဒါဆို နောက်နေ့ မင်းဂျီးဒေါ်ကို ပါခေါ်လာခဲ့၊ ငါလဲဇာတ်ခေါင်း
ကွဲလာတာနဲ့ အတော်ပဲ နှစ်ပါးသွားလေး ကရအောင်လေ”။ ဟုပြောရာ စပယ်ရာ ပါးစပ်တိတ်သွား၏။
အတန်းထဲတွင်ဖြစ်သည်။ ဆရာမက မေးသည်။
“ငါးလိပ်ကျောက်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ပြားပြားကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ”
ပီတာလေးက လက်ညှိုးထောင်ပြီး ဖြေသည်။
“ပီတာ၊ အခန်းထဲက ချက်ချင်း ထွက်သွားစမ်း”
ဤသို့ အမိန့်ပေးပြီး ဆရာမက ဆက်မေးသည်။
“ကျောက်ပုစွန်ရဲ့မျက်လုံးတွေ ဘာဖြစ်လို့ ပြူးထွက်နေရတာလဲ၊ ဘယ်သူ သိကြသလဲကွယ်”
ပီတာလေးက နောက်ပြန်လှည့်ပြီး အော်ပြောသည်။
လူငယ်တစ်ယောက် မိမိအပ်ထားသော ဖိနပ်ကို လာရွေးသည်။
“ပြင်ခ ၂၀၀ ကျပါတယ်”
“နည်းလှချည်လား၊ ကျွန်တော်လာအပ်တုန်းက လေးရာကျမယ်ဆို”
“ခင်ဗျား ဖိနပ်တစ်ဖက် ပျောက်သွားလို့ပါ”
လူစကားပြောတတ်သော ကြက်တူရွေးကြီးကို မိန်းမကြီး ၀ယ်လာသည်။အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ကြက်တူရွေးကို ပြောသည်။
“ငါပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်ပြောစမ်း၊ ကျွန်ုပ်သည် လူဖြစ်သည်။ လူစကားပြောတတ်သည်လို့”
ကြက်တူရွေးက အံ့သြတကြီး ပြန်မေးသည်။
“ အလိုလေး..ခင်ဗျားကလည်း လူစကား ပြောတတ်တယ်..ဟုတ်လား”
" လက်ထပ်မှာသာ ထပ်လိုက်ပါသမီးရယ် ၊ ငရဲတကယ်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ဖို့ မေမေ့တာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါ "
ကမ္ဘာသစ် ၂ နှစ်ပြည့် ဟာသလက်ဆောင်
…မုန့်မှာထားသော အိမ်တစ်အိမ်ကို ဂျော်နီ ပီဇာမုန့်သွားပို့ရတယ်၊
“ဘောက်ဆူး ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ” မုန့်လက်ခံတဲ့လူကြီးက အသံခပ်အစ်အစ်နဲ့ မေးတယ်။
“ကျွန်တော်က အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ကို ပို့ပေးဖူးတာပါ၊ ဟိုကောင်တွေကတော့ ဦးလေးဆီက ငွေတစ်မတ် ဆုကြေးရရင် မင်းသိပ်တော်လို့ပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်” ဂျော်နီက ခပ်ရို့ရို့ ပြန်ဖြေတယ်။
“ဟုတ်သလား၊ အခု ငါက မင်းကို ငါးဒေါ်လာ “တစ်” ပေးလိုက်မယ်ကွာ”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဒီပိုက်ဆံကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ စုငွေထဲကို ထည့်လိုက်ပါ့မယ်”
“ဒါနဲ့ ငါ့တူက ကျောင်းမှာ ဘာတွေ သင်နေသလဲ” လူကြီးက စပ်စုတယ်။
“အသုံးချစိတ်ပညာပါ” ဖြေပြီးတာနဲ့ ဂျော်နီ လှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။
…ဆရာက ပထ၀ီဘာသာသင်နေတယ်၊ သူက မြစ်ကြီးတွေအကြောင်း ရှင်းပြနေရင်း အခုလို မေးတယ်။
“ကမ္ဘာမှာ အရှည်ဆုံးမြစ်ကို သိသလား ဂျော်နီ”
“ဆရာ မသိရင် ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာ ရှာပေးမယ်လေ” ဂျော်နီက ခပ်တည်တည်ပဲ ထဖြေတယ်။
…ဂျော်နီ ကျောင်းအသစ်မှာ ကျောင်းတက်ရမှာမို့ သူ့ဖေဖေက ဆရာမကို လိုက်အပ်တယ်။ သားက အလောင်းအစား အလွန်ဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းလည်း ဆရာမကို သူက သတိပေးတယ်။ ဆရာမက ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဒီထက်မကဆိုးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုတောင် သူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့ဖို့ပြောတယ်။
…ညနေကျောင်းဆင်းချိန်ကျတော့ သူ့ဖေဖေက ဂျော်နီကို လာကြိုရင်း အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲလို့ သူ့ဆရာမကို မေးတယ်။
“ကျွန်မ သူ့အလောင်းအစား ၀ါသနာကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ပြီ” ဆရာမက ပြောတယ်။ “သူက ကျွန်မတင်ပါးမှာ မှဲ့ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်လို့ ငါးဒေါ်လာကြေး အလောင်းအစား ထပ်လာတယ်။ ခုတော့ သူ ရှုံးသွားပြီလေ”
“တောက်…ဒီကောင်ကွာ” ဂျော်နီ့ဖေဖေ အတော် ဒေါကန်သွားပုံရတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲရှင့်” ဆရာမ မျက်စိလည်သွားတယ်။
“မနက်က ဒီကောင် ကျုပ်နဲ့ ဒေါ်လာတစ်ရာကြေး အလောင်းအစား လုပ်သွားတယ်လေ။ ဒီနေ့ ဆရာမ တင်ပါးကို သူရအောင် ကြည့်ခဲ့မယ်တဲ့”
…ဥယျာဉ်ထဲမှာ တစ်ခုခုကို မြေဖို့နေတဲ့ မေရီကို ဂျော်နီ မြင်သွားတယ်၊ မျက်လုံးတွေမို့ပြီး ငိုထားတဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့ မေရီကို စူးစမ်းချင်စိတ်နဲ့ သူမေးကြည့်တယ်။
“ငါ့ရွှေငါးလေး သေသွားလို့ သူ့ကို မြေမြုပ်နေတာ” မေရီက မော့မကြည့်ဘဲနဲ့ ပြောတယ်။
“အို ဟုတ်လား၊ ရွှေငါးလေးကို မြေမြုပ်တာ ကျင်းက အကြီးကြီးပါလား” ဂျော်နီ့အသံက ဂရုဏာသံနဲ့ အံ့သြဟန် ရောစွက်နေတယ်။
“ဟုတ်တယ်၊ ငါ့ရွှေငါးက နင်ကြောင်ရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာလေ” မေရီက နောက်ဆုံး မြေကြီးတစ်ဆုပ်ကို ဖို့ရင်း ဖြေလိုက်တယ်။
…ဆရာမက ဒဿမကိန်းတွေရဲ့အကြောင်း သင်နေတယ်။ သူက ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ၁၀.၉ လို့ ချရေးပြပြီးမှ ဒဿမ(.)ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။
“ကဲ ဂျော်နီ၊ အခု ဒဿမ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ”
…ဂျော်နီက မဆိုင်းမတွဘဲ ချက်ချင်းထဖြေတယ်။
…ဆရာက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ သူတို့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေအကြောင်း သင်ပြီးတဲ့နောက် သူ့တပည့်တွေ ဘယ်လောက်မှတ်မိသလဲဆိုတာ ပြန်မေးကြည့်တယ်။
“ဂျိုး ဖြေပါဦး၊ ခင်မင်ဖော်ရွေတဲ့ ကောင်းကင်ရင်ခွင်ဆီကို ပျံသန်းလာခဲ့ပါ ဆိုတာ ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆောင်ပုဒ်လဲ ”
…ဂျိုးက အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ လေယာဉ်ကုမ္ပဏီရဲ့ အမည်ကို မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။
“လင်ဒါ ဖြေပါဦး၊ သူမပါဘဲ အိမ်ကနေ ဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဆိုတာက ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆောင်ပုဒ်လဲ”
…လင်ဒါက အကြွေးဝယ်ကတ်ပြားတွေထုတ်တဲ့ ဘဏ်ရဲ့နာမည်ကို မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။
“ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဂျော်နီ့အလှည့်ပဲ၊ ဒါပဲလုပ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကကော ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လဲ၊ မှန်အောင် ဖြေပါ။”
…ဂျော်နီက သွက်သွက်လက်လက် ထဖြေတယ်။
…သားတော်မောင် ဂျော်နီ သင်္ချာညံလွန်းလို့ မိဘတွေ စိတ်ညစ်နေကြတယ်။ ကျူရှင်ဆရာပေါင်းစုံသာမက ဗေဒင်ဆရာတွေဆီ၊ နတ်ကတော်တွေဆီအထိလည်း ရောက်ပြီးပြီ။ ဂျော်နီရဲ့အခြေအနေ တိုးတက်မလာဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ကျောင်းတစ်ခုက ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းကို ပို့လိုက်တယ်။
…ထူးခြားမှုက ပထမဆုံး ကျောင်းကပြန်လာတဲ့နေ့မှာ စတယ်။ ခါတိုင်း အကစားမက်တဲ့ ဂျော်နီဟာ ကျောင်းက ပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့အခန်းထဲကို တန်းတန်းမတ်မတ် ၀င်သွားပြီး သင်္ချာပုစ္ဆာတွေနဲ့ နပမ်းလုံးတော့တယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့လည်း စာကြည့်စားပွဲကို ချက်ချင်းပြန်ထိုင်တာ ညအိပ်ချိန်အထိပဲ။ ဒီလိုနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြိုးစားနေလိုက်တာ နောက်တစ်လ လပတ်စာမေးပွဲဖြေပြီးချိန်မှာတော့ သင်္ချာဘာသာမှာ “အေ” အဆင့်ရတဲ့ သားတော်မောင်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို မယုံနိုင်စရာ တွေ့လိုက်ကြရတယ်။
…အံ့သြ၀မ်းသာနေတဲ့ အဖေနဲ့အမေက ဂျော်နီရဲ့အခန်းထဲထိလိုက်ပြီး စကားပြောကြတယ်။
“သားအခုလို အေ အဆင့်ရအောင် တိုးတက်လာတာ သီလရှင်တွေကြောင့်လား” အမေက တအံ့တသြနဲ့ မေးတယ်။
“ဒါဆို အနီးကပ်သင်ပေးတဲ့ ဆရာမကြောင့်လား” အဖေက ၀င်မေးတယ်။
“ဒါဆို ဘာကြောင့်လဲ” အဖေနဲ့အမေက ဂျော်နီကို တစ်ယောက်တစ်လှည့် ၀ိုင်းမေးနေကြတယ်။
…ဂျော်နီက သူ “အေ” အဆင့်ရတဲ့အကြောင်းကို အခုလို ရှင်းပြတယ်။
“ကျောင်းကို စရောက်တဲ့နေ့က အ၀င်ဝမှာ ချိတ်ထားတဲ့ပုံ တစ်ပုံကို တွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သံရိုက်ခံထားရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံလေ၊ အဲဒီပုံကို တွေ့လိုက်ကတည်းက ဒီကျောင်းက တကယ်လုပ်မယ့်ကျောင်းဆိုတာ သိသာတယ်လေ”
…မျက်နှာကို ပေါင်းတင်တဲ့ ဆေးရည်တွေနဲ့ လိမ်းကျံနေတဲ့ အမေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရင်း ဂျော်နီက မေးတယ်။
“အမေ ဘာလို့ အဲဒါတွေ လိမ်းနေတာလဲ”
…နောက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ မျက်နှာပေါ်က ဆေးတွေကို ဖျက်ပစ်နေတဲ့ အမေကို ကြည့်ရင်း ဂျော်နီက ထပ်မေးတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ အမေ၊ လက်လျှော့လိုက်ပြီလား”
…ဂျော်နီလေးရဲ့ဟာသများနဲ့ ကမ္ဘာသစ်သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပြုံးပျော်ရွှင်လန်းကြပါစေ…